Norway: Soomaali iyo Carab ku dagaalantay xerada magangalyo doonka | Somaliska
Xero ay ku jiraan magangalyo doonka iska dhiibay Norway oo ku taala magaalada Sunndal ayaa waxaa ka dhacay dagaal balaaran oo dhex maray Soomaali iyo Carab.
Arinta ayaa la sheegay in ay ka dhalatay ka dib markii wax la gaarsiiyay mid ka mid ah magangalyo doonka iyadoo labada kooxood ay u kala safteen 10 Soomaali ah iyo 30 carab ah oo isugu jira Morookaan iyo Falastiiniyiin.
Xaalada ayaa gaadhay meel kulul iyadoo labo qof la sheegay in ay ku dhaawacmeen gacan ka hadalka oo xitaa boolisku uu xakameyn waayay mudo dheer. Booliska ayaa xitaa u wacday eeyaha iyadoo markii dambe xaalada la dajiyay.
Booliska ayaa ugu dambeyntii 3 qof xabsiga dhigay iyadoo labo la siidaayay halka mid kale lagu reebay xabsiga si wax looga waydiiyo in uu midi qof ku weeraray.
Islamkibaaba san is noqday o gaalo hoostoda udagaali,ilahow na baxso,
waxaan salaamayaa dhamaan hawl wadeenada webkaan Somaliska.com, Gaar ahaana waxaan u salaamayaa sxb-kay Jimcaale oo har iyo habeenba u heelan sidii somalidaan dhibaataysan uu wax ugu kordhin lahaa, wuuna ku mahadsan yahay ilaahayna ajar haka siiyo. Bacdal salaan Jimcaale sxb hadda waxaa iso wacay nin aanu sxb nahay oo waxuu igu dhahay (Migrationsverketka) ayaa waxuu soo qoray in dadka la isu keenaayo ciyaalka isu dhalay oo DNA-DHIIG loo kala qaadayo waxii 18 sano ka yar, marka saaxiib warkaas ma haysaa jimcaalow. waxana warka loo geliyey maanta ayuu leeyahay, (Jawaab Jimcaale sxb mahadsanid)
Waa sax warkaas balse mid cusub ma ahan, go’aankaas waxaa la gaaray bishii February marka bal dib u akhri wararkii hore ee aan qornay.
Laaxaawla walaa quwata illaa billaah ilaahow tawfiiqda na waafaji !
April 4, 2012 at 13:33
Wale wayab anyaren hadiba xeroyinka laisku leynayo wasabin aqir ilahayow qadimosan ayanka baryeyna
As,waxan slmi howlwadenada webka sibo jimcale o u istagay inu iskudayo inu xaliyo dadka iskubuko ama carur ama isqabo,ilahy ajir iyo xasanad hakasiyo,walalow waxan ahay inad xasusatid iyo inkale ma aqaane gabadh kuwaydinaysay su.al ahayd inan haysto pasport kenya ah kuna nolahay k/africa daganashana isaranyahay odaygaygana jogo swidan ciyalna aanan iskudhalin,jwb ayad isisay inadan hubin 100%arinkan waxan codsan laha mar 2 hadad awodo inaad iskudaydo inad laxarirto imagarationka war igaso siso,,hana dhibsanin walasha ayan ahaye abowe,
walal waad mahadsan tahay jimcaale, waana ku farxay jawaabtaada ilaahayna waxaanu ka rajeynaynaa sidii dhamaanteen khayr inooku jiro. JiMCAALE sxb mar labaad waad mahadsan tahay.
Su’aalaha iyo jawaabaha caadiga ah
Suurtagal ma noqon kartaa in dhammaan xubnaha qoyska oo aan la ahayn fursad ay ku helaan baasaboor/warqadaha aqoonsiga oo dalka Iswiidan laga aqoonsan yahay, in xiriir-qoyseed awgiisa sharciga lagu siiya?
Maya, xukunka micnahiisa waxaa weeye in hal carruur oo aanan xaqiijin karin aqoonsigiisa in uu heli karo sharciga deggenaanshaha si uu ugu soo guuro waalid u deggen Iswiidhan. Haddiii la caddeeyay in waalidka iyo ubadku ay qaraabo yihiiin, iyada oo la adeegsanayo baaritaanka dhiiga, ilmuhu waa uu heli karaa sharciga deggenaanshaha iyada oo aanan la xaqiijin aqoonsiga ubadkaas. Nafisidaan sidoo kale wuxuu khuseyn karaa waalid la codsanayo ubadkiisa, ama waalid rabo in uu u soo guuro ubad u deggan Iswiiidhan, haddii la xaqiijiyay waalidtinimada.
Marka uu qof qaangaar ah codsanayo sharciga deggenaanshaha isaga oo sheeganayo xidhiidhka xaas, nin, partner ama qof uu la nool yahay (iaya oo labadaas qof iska dhalin carruuur) weli waxaa shuruud ah in uu qofkaasi caddeeyo aqoonsigiisa.
Labada shuruudooba waxaa sidoo kale la socda oo loo baahanyahay in laqaado tijaabada DNA:ga si loo cadeeyo in caruura iyo waalidku is dhalay. Tijaabada DNA:go waxa ay kordhinaysa aminaada labada qof, kan waalida ah ee wax soo dalbady iyo kan dagan Isiidhan, madaama ay ku cadeeynayaan waqad dalbka in ay tijaabadaas laga qaaday oo ay famil yihiin.
Sidee loo sameeyaa tijaabada DNA: ga?
Utlandsmyndigheten (Hay’aad qaabilsan arimaha dibada), ayaa u yeeraysa qofka laga qaadayo tijaabada DNA:ga, waxaana laga qaadayaa candhuuf la tijaabiyo.
Yaa bixinaya qarashka tijaabada DNA: ga?
Hay’adda socdaalka ayaa ogolaatay in ay qaado tijaabada dhiiga ayada ayaana bixinaysa qarshka ku baxa.
Ilamhaygu waxa ay dalbanayaan sharciga daganaanshaha si ay u yimaadaan Iswiidhen oo ay iila noo laadaan. Waxaan rabaa in laga qaado tijaabada DNA: ga. Xageen ama yaan arintaas kala hadlikaraa/xiriirayaa?
Waxaad codsigaaga u gudbinaysaa Migrationsverket (Hay´adda socdaalka), balse waxaad ogaataa in tijaabada DNA: ga kaliya aysan kufilnayan in ay cadayso aqoonsigaaga/jinsiyadaada. Migrationsverket (Hay´adda socdaalka), waxa ay siinaysaa fursad qof kasata oo soo dalbada in uu sameeyo tijaabada DNA: ga, si uu ku helo sharciga daganaanshaha una cadeeyo xiriika qaraabanimo.
Waa micnaheed xukunka cusub oo ka yimid maxkamadda Hey’adda laanta socdaalka (Migrationsöverdomstolen)?
Xukunka micnaheeda waxaa weeye in ay u sahlanaaneyso carruurta aanan xaqiijin karin aqoonsigooda in ay si kastaba ha ahaatee helaan sharci deggenaansho si ay ula soo deggaan waalid Iswiidhan u deggan. Haddii la caddeeyo in ilmaha iyo waalidku ay qaraabo yihiin, iyada oo dhiig laga qaadayo, ilmuhu waa uu heli karaa sharciga deggenaanshaha weli aqoonsiga ilmahaa la xaqiijin. Nefisiddaan sidoo kale waxay khuseyn kartaa waalid oo la dalbanayo ilmahiisa, ama waalid rabo in uu u soo guuro carruur u deggan Iswiidhan, iyada oo markaas laga soo qaaday in la xaqiijiyay in uu waalid u yahay ilmahaas.
Waxaa Iswiidhan yimid soomaali oo magangelyo doon ah sanadyo badan gudahood waxaana suurtogal u noqotay in ay halkaan dib ula kulmaan reerkooda. Sanadyo kale dhexdoodana dad qaraabo ah oo dhan waa la diiday, laakiin hadda reer ciraaqi ah baa dib iskula kulmeen iyaga oo aanan haysan waraaqado aqoonsi oo la aqbali karo. Maxay Hey’adda laanta socdaalku ugu diideen intaas reer oo soomaali ah sharciga deggenaanshaha? Hey’adda laanta socdaalka miyaay ku adkaayeen sharrixiddoodi ay sameeyeen sanadyadaan ugu dambeeyay?
Maya, Hey’adda laanta socdaalka kuma ay adkeyn sharrixidoodi ay sameyeen. Tijaabooyinkii ay Hey’adda laanta socdaalku ku sameysay codsiyadaha waxaa hoggaamiya sharciga dadka ajnebiga ah. Go’aamada ay gaaraan migrationsdomstolen iyo migrationsöverdomstolen baa sheega habka sharciga loo turjumayo.
Go’aan ay migrationsöverdomstolen gaartay 12 maay 2011 baa wuxuu sheegayaa in dad kasta oo ka codsado sharciga deggenaanshaha dibedda oo markaasna doonayo in ay u soo guuraan qof deggan Iswiidhan ay khasab tahay in ay caddeeyaan aqoonsigooda si ay u helaan sharciga deggenaanshaha. Markaas keddiibna Hey’adda laanta socdaalka ma aysan tijaabin karin codsiyo la xidhiidha xidhiidhka-reerka oo ka yimid dad aanan xaqiijin karin aqoonsigooda.
18 jannaayo 2012 waxaa ka yimid xukun cusub migrationsöverdomstolen oo tusinaya in dib u kulmidda reerku ka miisaan badnaan karto aqoonsi la caddeeyay. Taasi micnaheedu waa in Hey’adda laanta socdaalku hadda ku sameyn karto qiimeyn deekhsi ah codsiyada reerarka carruurta leh. Hadda Hey´adda laanta socdaalka waxay tijaabin kartaa codsiyada xitta iyada oo baasaboor ama waraaqado aqoonsi aanan la hayn. Haddii codsaduhu ka yimid waddan aanan laga heli karin waraaqado aqoonsi ay Iswiidhan aqbashay waxaa dhici karto in mararka qaar ay Hey’adda laanta socdaalku siiin karto sharciga deggenaanshaha — haddiii la caddeeyay xidhiidhka waalidka iyo carruurta oona sidoo kale aqoonsigu suurtagal uu yahay.
Miyay beddeshay Hey’adda laanta socdaalku aragtida ay ka qabto baasaboorka soomaaliga ah?
Iswiidhan ma oggolaato baasaboor soomaaliyeed oo soo baxay ama la dheereeyey keddib 31 jannaayo 1991. Waa isla sharciyada ay Hey´adda laanta socdaalku haysatay illlaa iyo wakhti dambe ee waxna lagama beddelin.
Beddelka raacay xukunkii ugu dambeeyay oo ka yimid migrationsöverdomstolen micnahiisu waxaa weeyee in carruurtu fursad dheeraad ah u leeyihiin in ay sharci deggenaansho helaan iyaga oo aanan haysan baasaboor laga oggolyahay Iswiiidhan.
Hey’adda laanta socdaalka waxay tiri in aanan anigu wakiil ka noqon karin carruurteyda. Taasi weli ma sax baa?
Go’aan ka yimid Migrationsöverdomstolen 17 maarso 2011 waxay diidmo siiyeen codsi ka yimid sadex carruur oo soomaali ah oo rabay in ay Iswiiidhan imaadaan iyaga oo sheeganayo xidhiidhka aabahood oo deggenaansho rasmi ah haystay.
Marka loo eego sharciga iswiidhishka ah looma oggola in ilmo keligood codsi geystaan, ee waa in codsigaas uu u geeyaa qof mas´uul waalid ka ah. Arrintaan aabuhu ma uusan xaqiijin karin in uu u yahay wakiil sharciyaysan carruuurta iyo in uu markaas cxaqq u leeyahay in uu hadlo oona sidoo kale codsigooda dhiibo. Sidaas daraadeeed baysan Hey’adda laanta socdaalku u tijaabin karin codsiga carruurtaas gebi ahaanba.
Arrintaas waa ay is beddeshay laga bilaabo xukunkii ka yimid migrationsöverdomstolen 18 jannaayo. Haddii barrintaanka dhiiga uu caddeeyo waalidtinimada, oo markaasna aysan wax kale ka soo horjeedin arrintaas, waalidku wuxuu xaqq u leeyahay in uu wakiil u noqdo ilmaha, oo sidoo kale markaas codsigoooda dhiibo.
Carruurteydu ma haystaan baasabooro, laakiin waxaan ku caddeyn karnaa in aan qaraabo nahay baaritaanka dhiiga. Ma ay heli karaan sharciga deggenaanshaha hadda?
Arrimaha khsueeya carruurta qaan-gaarka ahayn badanaa waxaa miisaan badan xidhiidhka qaraabada marka loo bardhigo shardiga xaqiijinta aqoonsiga marka laga hadlo qiimeynta Hey´adda laanta socdaalka. Haddiii adiga ama waalidka kale aad caddeyn kartiiin in aad tihiin waalidka ilmahaas oo markaas aad tihiin wakiilka sharciyeysan ee ilmahaas, waad u dalbi kartiiin sharciga deggenaanshaha ilmahaas Hey´adda laanta socdaalka waa ay tijaabin kartaa codsigiina.
Diidmo baan ku helay codsigeysa sharciga deggenaanshaha waanan ka dacwooday. Hadda maxaa dhacaya?
Haddii aad ka dacwootay ooona aadan weli ka helin go’aan maxkamadda ma aad u baahnid in aad wax suubisid. Maxkamadaha Hey’adda laanta socdaalka baa raacaya xukunka migrationsöverdomstolen.
Haddii aad diidmo ka heshay maxkamadda Hey’add alaanta socdaalka waxay uga dacwoon kartaa migrationsöverdomstolen.
Haddii aad heshay go’aan dambeys ah oona aadan ka dacwoon karin waxaad ku soo dhawaataa in aad codsi cusub geysatid. Heyadda laanta socdaalka markaas waxaay ku tijaabin doonaan codsigaada iyaga oo raacaya turjumidda ay migrationsöverdomstolen sameysay.
Anigu kuma xoojin karo aqoonsigeeyga basaboorka dalkeeyga madaama aan haaysto baasaboor ee Hey’adda laanta socdaalka aqbaleeyn — Anigu aqoonsigeeyga si kale ma ku xoojin kara?
Adiga ayaa go’aaminaayo waxaad soo bandhigeeyso si aad uu xoojiso aqononsigaada. Cadaaynta qimaadeeda si xurnimo ah ayee uu shaqeeynee. Hey’adda laanta socdalka waa tixgalinee dhamaan cadeeymada aad adiga soo bandhigeeyso.
Hadi aad heeysan bassabor ansax ah, mararka badankood warqada kale oo rasmiga ah ma xoojin karaan aqoonsigaada. Hase ahaate, qimaayn kasoo aruursan waraqaha rasmiga ah aad keentay, waxee keeni karta iney Hey’adda laanta socdalaka u aragto in aad xoojisay aqoonsigaada.
Hey’adda laanta socdalka dhinaceeda waxeey tilmaameeysa in waraaqaha aqoonsiga dhamaantood iyo in dukumentiga ka socda Soomaliya, in eey qimeeyn yar leedahay markii la go’aaminayo aqoonsiga.
Waxaa tusaale uu ah dokumentiga caawin karo xoojinta aqoonsiga:
dokumenti aqoonsi oo lagu soo saaray dal sadaxaad
shahaado marqaati ka socoto qaraabo dhow — tusaale ahaan qaraabada Iswidhan ku nool (waxaa laga wada qofka loo tix raacaayo) ama warbixinta qaraabada dhow oo adiga kuugu saabsan.
Yaa go’aaminaya hadii la sameeyn karo baaritaanka DNA:da?
Adii Hey’ada laanta socdola ku qimeeyneeyso in baaritaan-DNA keeni karo in uu aqoonsiga loo arko mid xoojisan, markaas ayaa qofka codsadaha ah loo soo bandhiga baaritan-DNA.
Si kasta ha ahaatee baritaan DNA kaligiis ka ma warami karo aqoonsiga, laakin waxuu tusinaa qarabanimo ka dhaxeeyso qofka codsadaha iyo qofka loo tixraacaayo. Sidaas darteed ayee ku xoojin karta caddayn-marqaati kalsoonida oo lala soo dhibaayo codsiga ama inta uu socdo baritaanka.
Dalalka yurub qaarkood weey aqbalaan baasaboorka soomaaliga — sababtee ay Iswiidhan uu aqbali waaysay basaaboorka soomaaliga?
Waa run in qar dalalka yurub kamid ah aqbalaan basaboorka soomaaliga. Iswidhan ma aqbalaayso basaboor soomaali oo soo baxay ama la dheereeyay ka dib 31 jannaayo 1991. Sababta waxaa waaye in eey san soo saarin basaboorada, hey’ad ku haboon soo sarida oo lagu sheegi karo in ay heeysato dhulka bassaboorka lagu soo saaray.
Warkaas horaa loo soo qoray waxba maadan soo kordhin
Maasha allah (cadefidow) aad ayaad umahadsan tahay warbixin aad u dheer oo wax badan laga fahmi karo oo iftiin ah sida qoraxda oo kale ah ayaa soo qortay waadna ku mahadsan tahay. Aniga shaqsiyadayda haddan ka hadlo wax badan oo iga qaldanaa ayaad ii saxday, waxa _aana qiyaasayaa dad badan inay faa,ido utahay oo si fiican wax ufahmayaan, mahadsanid Cadefidow mar kale.
Fatum siyad says:
April 4, 2012 at 17:09
Warkan naguma cusbo waki jimcale o aad so copy garaysay,teeda kale nimco walal arinkada ma cuslo hadad paspot kenyan ah haysato waxay ilatahay inaysan adkayn dadka maxkamadana adiga tadada way kabaxsantahay wa malahayga blse jimcale iyo dhaman akhristayasha igudhamo ayan ogadhaxbixi sida cadefidow,
asc dhamaan waa idin salaamey inta swedan jecel iney tagto o buufiska niyada gishtey waa idin duceenaya inta qeyr ugu jirto ilaahey inu sahlo jimcaalo ugaas adigana shaqadan ajir iyo xasanaat alaha kaa siyo aaaaaaamin
Waxbaa ka dhacay meesha oo wax Afrikaan madow ah oo noo hiiliya malaga waayay xerada hadey carabtii aan ururkooda jaamacadda ka midka ahaynba iskugu keen habarwacdeen. Kaftan leen ka wadaa ee maslaxad qeyr qabta Allaha dhex dhigo maahan wax lagu farxo dad muslimiin ah oo dhexdooda ka dagaalamaya.
mashaqo badana yaa og iney muslimin wada yihin
April 4, 2012 at 21:33
alle hakala qaboojiyo labaduba waa muslimiin gaalo dhexjoota qaxoootina ku wada ah dhulgaalo
April 5, 2012 at 00:18
Asc marka hore dhamaan aqyaarta 2 aad dhalinta soo diyaarisay webka umada is dagaashay alle ha kala qaboojiyo marka hore marka xigta walaasheey nimco waxan ba dhihi laha walal mcn hadaadan ba hada ka hor imaan yurub hadana iska dhaaf
faa,iido malahoo anagaa aragnaye xumaana ha íiga qaadin wa iga dar daaran maxaa yeelay yurub meelna kuma fcna qeeyraadkiina afrika ayow ku haray ayagaaba hada afrika noo daba mari raba waa mahadsantahiin
Carab waxeey noo heestaan inaan iyaga adoon u nahay!? MELL KASTA WAA SAAS, YA CABIIID! uun beey nagu yiraadiin!, waxa nagu saliday aan la yaabey!
war soow soomalidu muslim maahan!? meey taas ku ixtiraamaan!, maxeey u baneeysteen dhiigoooda?. caradda i heeysa in aan hadda aado carabtaas e goowr gooraco ey ugu maree..!